अफगानिस्तानको कहालिलाग्दो अवस्था : आफ्नै बाबुले घर खर्चको लागि नजिकै बसेकी छोरीलाई २२०० डलरमा बेचिदिए – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on अफगानिस्तानको कहालिलाग्दो अवस्था : आफ्नै बाबुले घर खर्चको लागि नजिकै बसेकी छोरीलाई २२०० डलरमा बेचिदिए
–आसिफ खान तुर्क – म पाकिस्तानको पेसावार सहरमा बसेर एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको छु। छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानमा पछिल्लो समयमा विकसित घ—ट—ना—क्र—मले मानवीय सं—क—ट–को आभाष दिन्छ।
पेसावारबाट अफगानिस्तानको राजधानी काबुल २ सय ८२ किलोमिटर टाढा छ। दुई देशको बीचमा रहेको खैयबार पास पार गरेपछि जलालावाद हुँदै काबुल पुग्न सकिन्छ। ज—ला—ला—वा—द काबुल नजिकैको सहर हो, तालिवानले यो सहर नियन्त्रणमा लिएपछि तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानी मुलुक छाडेर बाहिरिएका थिए।
पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा रोटीका लागि बालिका बेचिएको घ——–ट—-ना सुन्दा आङ सिरिङ्ग हुन्छ। कतै दन्त्यकथा सुनेको पो हो कि भन्ने अनुभूति पनि हुन्छ। हामी बच्चा हुँदा सय वर्षअघि यसरी नै मानव बे—च—बि—ख—-न हुन्थ्यो रे भन्ने कथा सुन्थ्यौं, त्यसैको पुनरावृत्ति पो हो कि भन्ने भान हुन्छ।
गत साता मात्र बीबीसी, सिएनएनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चरम गरिबीले गर्दा अफगानिस्तानका विपन्न परिवारले छोरीहरु बेचेको कथा प्रकाशित भए। त्यहाँको बाद्गिस प्रान्तको एक परिवारले खानेकुरा किन्ने पैसा जुटाउन नौ वर्षीया बालिकालाई बेहुलीका रुपमा ५५ वर्षीय व्यक्तिलाई बे—-चे——को थियो, जुन कथा हृ—–’द—य—-वि—-’दा—–र—क थियो। विवाहको नाममा ती बालिकामाथि कति च—-’—र——-म शो—-’ष——-ण भयो होला, त्यसको कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ।
सात जनाको परिवारका लागि छाक जुटाउन कुनै उपाय नभए—पछि सो परिवारले ती बालिकालाई बे—-चे—–को जनाएको छ। बे—–चि—-एकी ती बालिकामाथि अब परिवारको कुनै हकअधिकार छैन। ५ सय अमेरिकी डलरमा बेचिएकी ती अ—-बो—ध बालिकाले अनेक अ—-त्या—चा–र र पी’—-डा खपेर जिन्दगी बिताउनुपर्ने निश्चित छ।
तलिवान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था त’—ह—स—’न—–ह—’स भएको छ। रोजगारीको कुनै उपाय छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विदेशी निकायको बैंक एकाउन्ट फ्रिज भएको छ। एकाधबाहेक त्यहाँ कुनै पनि विदेशी एजेन्सीको त्यहाँ उपस्थिति देखिँदैन।
ता—लिवा–नलाई अझै उन्माद छ, सरकार चलाउने कुनै तौरतरिका थाहा छैन। सरकारी ढुकुटी गो’—लि—ग’—ठ्ठा —र ब’—-न्दु—-क’मा खर्च भएको छ। केही काम गर्छु भन्नका लागि पनि कि त सरकारी ढुकुटीमा पैसा हुनुपर्छ, कि त विदेशी निकायले पत्याउनुपर्छ। यी दुवै अवस्था अफगानिस्तानमा छैन।
शिक्षामा पनि तालिवानले आफ्नै फरमान जारी गरेको छ। केटीहरुलाई सहशिक्षाका रुपमा कलेज जान वञ्चित गरिएको छ। यसरी केटीहरुलाई स्कुल जान वञ्चित गरिएपछि उनीहरुको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ। स्वास्थ्य, उद्योगधन्दालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको स्थिति पनि ना—-जु—क छ।
अहिलेसम्म तालिवानले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथसहयोग पाएको छैन। कुनै पनि देशले तालिवान सरकारको समर्थन गरेका छैनन्। यतिसम्मकि सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश पाकिस्तानले पनि तालिवान सरकारलाई समर्थन जनाएको छैन। लोकतन्त्र र मानवअधिकारको विपक्षमा रहेको तालिवान सरकारले यस्तो समर्थन पाउने सम्भावना पनि न्यून छ। त्यसैले, अफगानिस्तानमा रहेका नागरिकमा त्रा’—–स, अ—-न्यो—-ल र द्विविधा रहेको छ।
त्यहाँ अहिले खाद्यान्न सं’—-क—-ट ग—-’हि—-रो बन्दै गएको छ। अफगानिस्तानका करिब १ करोड मानिस च—’र—–म भोकमरीको समस्यामा रहेका अनुमान छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, त्यहाँका विपन्न वर्ग मात्र होइन, मध्यम वर्गले पनि खाद्य सं’कटको सामना गरिरहेका छन्।
मैले अफगानिस्तानमा रहेका पत्रकार तथा साथीभाइसँग कुराकानी गर्दा खानेकुरा अ—भा—–व भएपछि मध्यम वर्गीय परिवारले पनि आफ्नो जायजेथा बेच्न थालिसकेका छन्। घरमा राखिएका टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन आदि सस्तो मूल्यमा बेचेर खानेकुरा जु—टा–इरहेका छन्।
म पाकिस्तानमै बसेर अफगानिस्तानमा भएका घ—–ट—नाको ‘अपडेट’ नियमित लिइरहेको छु। तीन महिनाअघि तालिवानले सत्ता ह ‘——-त्या’एपछि त्यहाँ दिनानुदिन संकट चुलिँदै गएको छ। त्यहाँ काम गर्ने स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारलाई ज्यादै ठूलो जो—खि—–म छ। ज्यानै जाने ख—-’त—-रा देखिएपछि अधिकांश पत्रकारले सक्रिय पत्रकारिता छा—डे—-र पलायन भएका छन्। तालिवान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा एक जना पत्रकारको ह’—– ‘त्या हुनुका साथै ३० जनाभन्दा बढी पत्र–कारमाथि हा—’त—पा—-’त तथा हिं’—सा’—-त्म—क घ—ट—-ना भएका छन्।
राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्ने स्थानीय पत्रकारले अफगानिस्तानमा भएको दयनीय अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न आनाकानी गर्छन्। त्यहाँ तालिवानले गरेको कतुर्त कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आयो भने पत्रकारको ज्या’न नै जो—खि—ममा पर्न सक्छन्। त्यही भएर पनि पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा च’र्किएको भोकमरीको समस्या, तालिवानले महिलामाथि जारी गरेको क’—–डा कानुनलगायत विभिन्न विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा थोरै मात्र समाचार पढ्न पाइन्छ।
अहिले अफगानिस्तानमा रहेका नागरिक अनिश्चयको भूँमरीमा त—’ड्पि——’ए—-का छन्। कति बेला के हुन्छ? केही थाहा छैन। तालिवान सरकारले देशलाई कता लगेर भ’—ड्खा—-’लो—मा जा’—–क्ने हुन् कि भन्ने सं—’श–य छ। नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई ब’—न्ध’—-क बनाइएको छ।
केही दिनअघि एकजना अफगानी साथीसँग कुरा भएको थियो। मैले त्यहाँको के छ खबर? भनी सोधेको थिएँ। अ–न्यम–न—स्क भावमा उनले भन्यो–के खबर हुनु र, जिन्दगी अनिश्चितताको भुँ’मरीमा फ—’सिर—हे—को छ। त्यसपछि मलाई उनीसँग धेरै लामो कुराकानी गर्ने ‘मु—-’ड’ चलेन। मैले मनमनै प्रार्थना गरेँ–अफगानी नागरिकले यो दु—–र्दि—नबाट छिट्टै मु—-क्ति पाऊन्।
यी अभागी बाबु खर्च धान्न नसक्दा २२ सय डलरमा ९ बर्षिया पार्वाना लाई ५५ वर्षीय कुर्वानलाइ बे—चि—-दि—ए
तालिवान शासित अफगानिस्तान आर्थिक सं’कटमा फस्दै जाँदा मुलुकका विभिन्न भागमा प्रतिबन्धित प्रथाले पुनः टाउको उठाउन लागेको छ। परिवारका लागि खर्च जुटाउने नाममा विवाहका लागि बालिका बे—च्ने प्रथा फेरि सुरु भएको पाइएको छ। पछिल्लो महिनामा गरिबी र भोक—-मरीसँग जुधिरहेका अफगान परिवारले जीवन धान्नका लागि पैसा जुटाउन विवाहको नाममा कलिला बालिका बेच्न बा’—-ध्य भएको जनाएका छन्।
यस्तै हृ’—द—यवि—’दा—र—क कथा छ-नौ वर्षीया पार्वाना मलिकको। उनलाई परिवारले गत महिना ५५ वर्षीय कुर्वान भन्ने व्यक्तिलाई बेच्यो। उनको परिवार द्व’—–न्द्व—’ले ज’—र्ज—-’र बा’—-द्घि—-स प्रान्तमा रहेको आन्तरिक विस्थापित व्यक्तिका लागि बनाइएको शिविरमा बस्दै आएको छ। तालिवानले सत्ता क’—ब्जा गरेपछि रोजगारी गुमेकाले उनको आठ जनाको परिवारलाई छा—-क टा—’र्न धौ—धौ छ। अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले अफगानिस्तान छाडेपछि त्यहाँ विदेशी सहायता पनि ठ—प्प भएको छ।
पार्वानाका बुबा अब्दुल मलिकले आर्थिक संकटले गर्दा दुई महिनाअघि नै १२ वर्षीया छोरी बे—चे–को खुलासा गरिसकेका छन्। अहिले उनी परिवारको छा–क टा—-र्न अर्की छोरी बे—-च्न बा’—-ध्य छन्। यो निर्णयले आफूलाई दुः—खी, दो—षी, ल’—ज्जा’—स्प—द र चि–न्ति—त बनाएको उनको भनाइ छ।
त्यसो त पार्वानाको पढ्ने रहर छ। उनी पढेर पछि शिक्षक बन्न चाहन्छिन्। तर, परिवारको विकराल आर्थिक अवस्थाले गर्दा उनका लागि पढाइको ढोका बन्द भएको छ। हुन लागेको विवाहको बारेमा कुरा गर्दा पार्वाना भ’यभि’त हुने गर्छिन्। ‘त्यो ‘बुढो मान्छे’ सम्झिनेबित्तिकै मलाई डर लाग्छ, उसले मलाई कु—’ट्ने—’छ, ज–’ब’—र्ज’—-स्ती मलाई उसको घरको काममा लगाउनेछ,’ उनले भनेकी छन्।
अब्दुल मलिकले छोरीको नयाँ मालिकलाई भ—–’क्का–निँदै भने, ‘यो तिम्रो बेहुली हो, राम्रोसँग यिनको हेरचाह गर्नू, यिनलाई न’—-पि—’ट्नू है।’ रोएको अब्दुललाई सम्झाउँदै कुर्वानले भने, ‘ पक्कै पार्वानालाई माया गर्नेछु अनि परिवारको सदस्यका रूपमा व्यवहार गर्नेछु।’
त्यसैगरी, छिमेकी घोर प्रान्तमा ऋण तिर्न नसकेपछि त्यसको बदलामा अर्काे परिवारले १० वर्षीया छाेरी मागुललाई ७० वर्षीय वृद्धसँग बिहे गरिदिने निर्णय गरेका छन्। ‘म मेरा बाबुआमालाई छाड्न चाहँदिनँ। यदि म त्यहाँ जानुपर्‍यो भने बरु आ—फैं म’—-र्छु,’ मागुलले भनेकी छन्।
पार्वाना र मागुल त प्रतिनिधि पात्र हुन्, तालिवानले सत्ता लिएपछि अफगान बालिकाहरूको भविष्य अन्धकार भएको छ। तालिवानलाई महिलालाई माध्यमिक तहमा पढ्न नि—-षे—–ध गरेको छ। गरिबीको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ। धेरै बालिका विवाहका नाममा बेचिएका छन्।
‘यदि बालिकाहरु स्कुलमा भर्ना भएका छन् भने परिवारले उनीहरुको भविष्यका लागि लगानी गर्छन्,’ ह्यु—’–मन राइट्स वाचका हिथर बारले भने, ‘ बालिकाहरूलाई शिक्षाबाट व—–ञ्चि—त गराउनेबित्तिकै उनीहरू यो कु—’प्र—था—-’को सि—’का—’र भएर बे—–चि—इ—न्छ—न्।’
← प्रेमको मामिलामा निकै पक्का हुन्छन् यी ३ महिनामा जन्मने व्यक्ति, तपाई कुन महिनाको ? → डा. बाबुरामकी छोरी मानुषी बारे केपी ओलीले सतथ्य बोल्नुभएको भन्दै सूर्य थापाले दिए प्रमाण